Wararka xanta ah ayaa u mahadcelinaya Lisa Jackson: Dhacdadii Sebtember | Waxaan ka imid mac
Wararka xanta ah ayaa u mahadcelinaya Lisa Jackson: Dhacdadii Sebtember
Rubuc -dhammaadka sannadka mar walba waxaa jira dhacdo Apple ah oo lagu soo bandhigo wararka sannadka soo socda. Sannadkan waxaa la filayaa inuu noqdo badhtamaha bisha Sebtember, laakiin arrimuhu aad uma cadda. Waxaa jiri kara ama laga yaabaa inaysan jirin dhacdo kaliya ku tiirsan shirkadda Mareykanka. Laakiin waxay u muuqataa inay jiri doonto. Ugu yaraan waa sida ay uga soo baxaan xanta cusub ee ka dhalatay natiijada Isbedelka sawirka astaanta guud ee Twitter oo ka socota Madaxweyne ku xigeenka Lisa Jackson.
Madaxweyne ku -xigeenka Apple ee deegaanka, siyaasadda iyo dadaallada bulshada, Lisa Jackson, ayaa kor u qaaday dhammaan qeylo dhaanta ku saabsan wararka xanta ah ee ku saabsan haddii ay dhici doonto dhacdo Apple bisha Sebtember iyo in kale. Wararka xanta ahi waxay tilmaamayaan in haa, xitaa la xusay in lagu samayn karo laba taariikho oo qiyaas ah. 14 -ka ama 21 -aad.Laakiin dubitaanka oo dhan kuma jiro foornada sidaas si dhab ah looma oga.
Isbedelka sawirka astaanta u ah madaxweyne ku xigeenka ayaa tilmaamaya inay jiri karto dhacdo noocaas ah. Sababta? sababta oo ah asalka ka taliya sawirka astaanta guud. Goobta loogu talagalay sawirka aan fiicnayn ee Jackson waa isugeyn si joogto ah ugu muuqata bandhigyada Dhacdada Apple, taas oo Waxay ka kooban tahay qol leh wareegyo is -dul saaran saqafka.
Kuwa ugu caqliga badan ayaa isku keenay dhibcaha waxayna go'aansadeen in sawirka la sameeyay markii uu duubayey qaybtiisa soo bandhigidda dhacdada. Taasi waa sababta ay u malaynayaan inay noqon doonto bisha Sebtember waana sababtaas in goleyaasha taageerayaasha ugu waaweyn ee Apple ay ka caroodaan aragtidan. Maraykanka Waxaan dhihi karnaa oo kaliya waxay u badan tahay inay dhacdo dhacdada bisha Sebtember. Sanadihii la soo dhaafay sidaas ayay ahayd oo Apple kuma guuldaraysan. IPhone -ka cusub waa in la soo bandhigaa. Kiis kale waa Mac -yada cusub, kaas oo i siinaya aragti ah inaan sugi doono wax badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Wararka xanta ah ayaa u mahadcelinaya Lisa Jackson: Dhacdadii Sebtember
DaVinci Resolve 17.3 hadda waa la heli karaa iyada oo la siinayo 3x dhaqso dhaqso ah M1 Macs
Sicir -dhimis weyn oo loogu talagalay keyboard -ka Farshaxanka ee Logitech ee cajiibka ah